Mapikicha okuWarwick (May–August 2015) | JW.ORG
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Central) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Valencian Yoruba Zulu
Ona mafambiro akaita basa rekuvaka mahofisi makuru matsva eZvapupu zvaJehovha uye kuti vashandi vaiuya kuzobatsira pakuita basa racho asi pasina mari yavaipiwa, vakaritsigira sei kubva muna May kusvika August 2015.
6 May 2015—Zvakaita Nzvimbo Yacho kuWarwick
Mumwe murume ari kuda kuisa muchina wekusefa marara mudhamu rinonzi Sterling Forest Lake (Blue Lake). Muchina wacho unoita kuti marara akakura asapinda nechepasi panobuda napo mvura mudhamu racho.
6 May 2015—Maintenance Building nePokupakira Motokari Dzevanogarapo
Vashandi vari kuisa kongireti pakamudhuri kari padenga reMaintenance Building. Nzira yavari kuisa nayo kongireti ichibuda nemupombi, iyo inozivikanwa seshotcrete, inokurumidza kudarika nzira yagara ichishandiswa pakuvaka, yekuita zvekuidurura.
15 May 2015—Zvakaita Nzvimbo Yacho kuWarwick
Mukadzi anoshandira mudhipatimendi rinoona nezvekuchengetwa kwemashoko (Documentation Department), ari kutora mapikicha ebasa rekuvaka riri kuitwa. Dare Rinotungamirira rinotarisa mapikicha acho vhiki nevhiki kuti rione kuti basa racho riri kufamba sei.
30 May 2015—KuTuxedo
Murume nemudzimai vanobva kumaodzanyemba kweCalifornia vachangobva kusvika kuti vabatsire mudhipatimendi rinoita zvekugadzira pombi. Musi iwoyo kwakasvikawo mazana evanhu kuTuxedo, iyo iri nzvimbo inoshandiswa pakutsigira basa rekuvaka riri kuitwa kuWarwick. Musi wa1 August, vashandi vatsva 707 vakasvika kuti vabatsirewo pabasa racho rekuvaka.
9 June 2015—Residence B
Mudhuri wekongireti uri kusimudzwa necrane kuti uve paunofanira kunge uri. Residence B ndiyo yakapedzisira kuiswa midhuri iyi nemahwindo.
16 June 2015—Residence C neD
Vashandi vari kuisa nzira yekufamba nayo iri mudenga inobva kuResidence C kuenda kuResidence D.
25 June 2015—Residence C
Vashandi vari kusima roni nechekumadokero kwenzvimbo yacho.
2 July 2015—Zvakaita Nzvimbo Yacho kuWarwick
Vashandi vari kugadzirisa munorasikira mvura kana dhamu rava kuzarisa. Dhamu iri rakavakwa kuma1950. Kugadzirisa ikoko kunokosha kuitira panguva inozoitika madutu akakura kana kuti pakazonaya mvura yakawandisa sezvava kuitika munharaunda yacho, uye izvozvo zvinobva zvaita kuti nzvimbo ine zvivako zvemahofisi edu uye zvimwewo zvivako zviri munharaunda yacho zvisakanganiswe nemadutu.
15 July 2015—Residence A
Mamwe mabasa anoda kuitwa mukati mezvivako, akadai sekupenda uye kunama pombi, anoitwa neusiku kuitira kuti panzvimbo yacho pasava nevashandi vakawandisa panguva imwe chete. Shifiti yechipiri payakatangwa, mazana evanhu akakumbirwa kuti ashande kubva na3:00 masikati kusvika na2:00 kunze kwava kuda kuyedza.
20 July 2015—Residence D
Mumwe wevashandi vanogadzira michina inodziyisa kana kuti kutonhodza mhepo muzvivako ari kudzidzisa mumwe waanoshanda naye kunama pombi.
21 July 2015—Residence B
Munhu ari kupenda masimbi enzira yekufamba nayo iri mudenga inobva kuResidence B kuenda kuMaintenance Building.
27 July 2015—KuTuxedo
Vanhu vari panopakirwa motokari vachimirira kutakurwa kuenda kuWarwick. Pane mabhazi akawanda anotakura vashandi kuenda nekudzoka kubva kuri kuvakwa.
Vashandi vatatu vekuWarwick vari kugerwa. Vhiki imwe neimwe vanhu vanopfuura 400 vanogererwa mumabhabhashopu ekuTuxedo, kuWarwick, uye muimba inochengeterwa zvinhu iri kuMontgomery.
3 August 2015—Zvakaita Nzvimbo Yacho kuWarwick
Vashandi vari kugadzira pekuzodirira kongireti panzvimbo yavari kuda kuisa pombi dzinofambisa kudziya kunobva pasi penyika. Pachange paine migodhi 120 yakadzika mamita 150 iyo ichange ichizoita kuti pave nekudziya kunodiwa munguva yechando uye kutonhorera munguva yekupisa kuwedzera pamichina inoshandisa simba remagetsi. Nzira iyi hainyanyi kudhura uye inoderedza kukanganiswa kwezvinhu zvakasikwa zviri panzvimbo yacho.
7 August 2015—KuMontgomery, iri kuNew York
Zvinhu zvinenge zvatengwa zvinosvikira muno, uye zvinozobatanidzwa kuitira kana zvava kuda kuzoshandiswa kuWarwick kuri kuitwa basa rekuvaka.
14 August 2015—KuTuxedo Park, kuNew York
Murume nemudzimai vari kubatsira pabasa rekuvaka kuWarwick (wechipiri newechitatu kubva kurudyi) vari kudya neimwe mhuri yemunharaunda iyoyo. Kungofanana nemhuri iyi, mhuri dzakawanda dzeZvapupu zvaJehovha dziri kugara nevashandi vanenge vauya kuzobatsira pabasa racho rekuvaka.
17 August 2015—Maintenance Building nePokupakira Motokari Dzevanogarapo
Mushandi ari kutarisa kurereka kwakaita nzvimbo yacho.
20 August 2015—Mahofisi neServices Building
Mahwindo akatopera kuiswa kunosvikira vaeni vanenge vauya kuzoona zvakaita mahofisi makuru.
26 August 2015—Zvakaita Nzvimbo Yacho kuWarwick
Padzimba dzese dzokugara dziripo, Residence B ndiyo yakapedzisira kuiswa midhuri nemarata. Basa iri rakaitwa kubva muna May kusvika muna August. Nzira dzese dzekufamba nadzo dzinenge dziri mudenga dzinobva pane chimwe chivako kuenda kune chimwe dzakatoiswa, uye mabasa akadai seekusima roni, maruva nemamwewo akatotanga.